HelpMEHemp | အပင် Protein Superfood သည်အော်ဂဲနစ်အရေပြားအာဟာရကိုရောစပ်ပေးသည်
NOW က Shopping
ထိုသုံးပါ HelpMEHemp® ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းနေထိုင်လေ့ရှိသောမလိုလားသောရောဂါများမှသက်သာရာရစေသောသဘာဝကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများ HelpMEHemp® စက်ရုံအခြေပြုထုတ်ကုန်လိုင်းများသည်လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးပေးသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်များအလွန်များပြားသည်။
Organic Unfined Hemp Seed ဆီ
အသားအရေမှအဟာရအထိ၊ HelpMEHemp® သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စေသည်။ Hemp သည်အလွန်ပျော်ဝင်နိုင်သောပျော် ၀ င်နိုင်သောပျော်ဝင်နိုင်သောဖိုင်ဘာ၊ အိုမီဂါ -၃ နှင့်အိုမီဂါ -3 ဖက်တီးအက်စစ်များ၊ အပင်အခြေပြုပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ လေ့လာမှုများအရ၎င်းသည်သင်၏အရေပြားကိုအကျိုးပြုနိုင်ရုံသာမကမျိုချမိပါကနှလုံးရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ PMS သို့မဟုတ်သွေးဆုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
Anti-inflammatory, Antioxidant, Antibacterial, Antiviral၊ Antifungal၊ အရေပြားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ Neuro-Protective နှင့် Cardio-Protective
omegas ကြွယ်ဝသောအစွမ်းထက် antioxidant သည်အန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များနှင့်တိုက်ဖျက်ပြီးအရေပြားကိုအသစ်ပြန်ဖြစ်စေသည်
2 အောင်စ Argan ရေနံ
ဗီတာမင်အီး၊ မရှိမဖြစ်ဖက်တီးနှင့်လင်းနိုအက်ဆစ်များ၊ အိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ခြင်း၊ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများကိုပြန်လည်သန့်စင်ပေးခြင်းနှင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဝက်ခြံ၊
HelpMeHemp's® Healing Bundle2တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂ အောင်စ Hemp Seed Oil Dropper၊ ၂ အောင်စ Argan Oil Skincare pump နှင့် ၄ အောင်စ Whip Lime Body Butter တို့ပါဝင်သည်။
HelpMeHemp's® အအေးပေးသည့် Hemp Seed Oil သည်ဆဲလ်အသစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်းနှင့်အရေပြားတိုးတက်မှုကိုအားပေးခြင်းဖြင့်သင့်အသားအရေကိုအာဟာရပေးသည်။ ဗီတာမင်များနှင့်အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းသောအရည်များ၊ လျှော်စေ့ဆီသည်အသားအရေအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရေပြားကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်ဆီထုတ်လုပ်မှုကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော်မျိုးစေ့သည်သင့်အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေသည့်အခါခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ၊ အဖုအပိန့်များ၊ HelpMEHemp's® Hemp Seed Oil သည်သင်၏အသားအရေကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးအပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲသင့်ကိုအသစ်သောအသစ်တစ်ခုအတွက်သင့်အသားအရေကို detoxify လုပ်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏အသားအရေကိုမျှတစေရန်၊ ထိုရယ်မောခြင်းများကိုလျှော့ချရန်၊ အနာပျောက်စေသောရောဂါသို့မဟုတ်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအသားအရေကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
HelpMEHemp's® Argan Oil သည်အသန့်ရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီးရွှေအရည် ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြသည်။ ဗီတာမင်အီး၊ မရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်စစ်များ၊ လင်းနိုအက်ဆစ်များနှင့်သင့်အသားအရေ၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများကိုအမှန်တကယ်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်သည့်အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်စင်သော Argan Oil သည်သင်၏အသားအရေကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောအနာအဆာများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ HelpMEHemp's® Argan Oil သည်သဘာဝ shine နှင့်ပျက်စီးနေသောဆံပင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ အစိုင်အခဲများကာကွယ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်၊ လက်သည်းကျိုးသည့်လက်သည်းများကိုသဘာဝပြန်လည်မွေးဖွားပေးသည်။ ခွင့်ပြုပါ HelpMEHemp's® ရွှေအရည် Argan Oil သည်သင့်အသားအရေကိုအိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောအဝါရောင်အုတ်လမ်းဖြစ်သည်။
HelpMEHemp's® Whipped Lime Body Butter သည်သင့်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးသင်လတ်ဆတ်သောထုံးကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်စားရန်လုံလောက်သောအနံ့ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ Lime တွင် Vitamin C ပါ ၀ င်ပြီးအရေပြား၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်တက်ကြွမှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုတိုက်ထုတ်သည့်အားကောင်းသော antioxidant ပါဝင်သည်။ HelpMEHemp's® ကြာပွတ်ထုံးခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း ဒါကြောင့်လည်းပါဝင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို။ ပင်မှော်ဖြစ်ပါတယ် HelpMEHemp's® လက်မှတ် Hemp Seed နှင့် Argan ဆီများ။ ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြွယ်ဝပြီးထူထဲသောသဘာဝကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ်တွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
*မှတ်စု: HelpMeHemp's® ကုသမှုအစုအဝေးကို 1 ပါဝင်သည် HelpMeHemp's® မဂ္ဂနီစီယမ်မှုန်ရေမွှား, Healing Bundle ကို2မထားဘူး
- Marilyn Stofan
ဤထုတ်ကုန်များကကျွန်ုပ်အားအံ့အားသင့်စေသည့်အပြင်နှင့်အပြင်ကိုခံစားစေသည်။ Argan ဆီ (သင့်အသားအရေထဲသို့အရည်ပျော် ၀ င်ရောက်ခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်၏အညစ်အကြေးခြောက်သွေ့သောအရေပြားနှင့်များစွာကူညီပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးကျွန်ုပ်၏အသားအရေညနေခင်းကိုကြည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ငါဆံပင်ပေါ်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ကောက်ကောက်ဆံပင်အဘို့အစာသားအကောင်းဆုံးအရာ။ ငါချောချောမွေ့မွေ့သွင်းထားသောလျှော်ရေနံနှင့်လျှော်မျိုးစေ့ကိုတစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်အားပိုမိုအာရုံစူးစိုက်။ ကြည်လင်စွာခံစားစေသည်။ ထုံးကိုယ်ထည်ထောပတ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်မှုန်ရေမွှားသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအိပ်ရာဝင်စေရန်အနားပေးသည်။ အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေပြီးအိပ်ရာပေါ်ကနိုးလာတဲ့အခါမကြာခဏတကယ်တင်းမာနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်ခုကိုအတူတကွသုံးပြီးကတည်းကကျွန်တော်အရမ်းအိပ်ပျော်နေတယ်။ ငါပြီးသားရလဒ်နှင့်အတူအလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်! ငါဆက်လက်သုံးစွဲနေသည်နှင့်အမျှပိုမိုတိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်ကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။ 10/10
- Tatiana ခ
ငါမတ်လမှာအာဂန်နဲ့လျှော်ဆီသုံးပြီးစတင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကငါမှာထားခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်နဲ့ပွတ်တိုက်နဲ့အနည်းငယ်နမူနာတွေရခဲ့တယ်။ ငါသည်အခြားအစိုဓာတ်ဖြည့်ပစ္စည်းများ / မျက်နှာအရေပြားလိမ်းဆေးများစသည်ဖြင့်မသုံးတော့ဘဲထိုအဆီနှစ်မျိုးလုံးကိုနံနက်တိုင်းနှင့်ညနေတွင်သာအသုံးပြုသည်။ ငါ့အသားအရေမည်မျှကြည်လင်တောက်ပလာသည်ကိုငါလွင့်ပစ်သွားသည်။ ငါ့အသားအရေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်အသားအရေကိုသန့်စင်ရန်တတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတိုင်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီး၊ ဤပစ္စည်းသည်ရွှေထက်ဆယ်ဆပိုများသည်။ ကျွန်ုပ်၏အမြဲတမ်းအမှောင်ထုများမှာကျွန်ုပ်နဖူးပေါ်ရှိငါ၏ကျီးကန်းခြေလေးများနှင့် WTF လိုင်းများနှင့်အတူအလွန်ကျဆင်းသွားသည်။ ငါသည်ဤခရီးစတင်သောအခါငါအဆီပြန် / ပေါင်းစပ်အသားအရေရှိခဲ့နှင့်ငါ့အရေကိုပိုပြီးအဆီပြန်စေလိမ့်မယ်လို့ကန ဦး စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ဘူး, ကမ! ငါ့အသားအရေသည်ဤအရည်ကိုရွှေဖြင့်တက်ပြီးတစ်နေ့လုံးကောင်းမွန်ပြီးရေဓာတ်ပြည့်ဝစေသည်။ မြင့်မားစွာအကြံပြုပါသည်။ လုံးဝထပ်မံဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်
- Sara အီး
လွန်ခဲ့သော2ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ underarm နေရာတွင်မသက်မသာနေရာတစ်ခုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအရမ်းနာကျင်ခဲ့ပါတယ်နှင့်နေ့စဉ်ပိုဆိုးပိုဆိုးခဲ့သည်။ နောက်တော့ဆရာဝန်ဆီသွားပြီးမုန့်နဲ့ဆေးတစ်ချောင်းပေးခဲ့တယ်။ ရှေ့ကိုမြန်မြန်သွားပြီးရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့နေတဲ့ဘာကြောင့်အစက်အပြောက်တွေပျံ့နှံ့နေတယ်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့ဆရာဝန် ၄ ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားခြင်း။ အလုပ်မလုပ်တော့တာတစ်ပတ်ကျော်ပြီ။ ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုနှင့်မျက်ရည်မကျဘဲကျွန်ုပ်၏ကလေးများအားဂရုမစိုက်နိုင်သကဲ့သို့လမ်းလျှောက်လည်းလည်းမရပါ။ ငါမကြာသေးမီကငါအရေပြားခြံ၌တက်မီးတောက်နှင့်ထို့နောက်ကြွင်းသောအရာတိုက်ခိုက်ရန်ကြောင်းပြောင်းပြန် psoriasis ရှိသည်အရေပြားရောဂါမှတဆင့်ထွက်တွေ့ရှိခဲ့ .. အရူး !!!
နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်ကကျွန်တော်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအတွက်လွန်ခဲ့သောလများကဝယ်ခဲ့သောလျှော်ရေနံကိုကျပန်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသည်က "ဘာဖြစ်လို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာမလိုဘဲ ... ဘာထပ်ထပ်ဆုံးရှုံးရသေးတာလဲ" ငါနှစ်ညညအံ့ဖွယ်အဆီ၌တက် lathered !!!! ၂ !!!!!!!
ဒီစာရိုက်နေစဉ်ငါမျက်ရည်ကျနေပြီ၊ အစက်အပြောက်များစွာထဲက Ya'll2ဟာအနီရောင်၊ ရောင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး၊
သူတို့ခန်းခြောက်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့အိပ်ယာ ၄ နာရီဆက်တိုက်အိပ်ခဲ့ရတယ်၊ ငါဒီနေ့အိပ်ယာကနေထနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤမိသားစုကိုကျွန်ုပ်အားကူညီခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီလျှော်ရေနံသည်အံ့သြစရာပါ။ ️️♥️♥️️♥️♥️️
- ဂါဗြေလ C
TAra k.1 / 17/2021 ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါလျှော်ရေနံသုံးလလောက်သုံးပြီးငါ့အရေပြားကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါ့မှာအသားအရေပိုလျှံနေပြီးငါ့ရဲ့အသားအရေဟာအခုအချိန်မှာပိုပြီးတောက်ပပြီးအခုအချိန်မှာတောင်တက်နေတယ်။ ငါသည်လည်းထုံးခန္ဓာကိုယ်ပွတ်တိုက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ကိုချစ်၏။ ထိုအခါငါ argan ရေနံငါ့အဘို့ရွှေကဲ့သို့ဖြစ်၏သဘောတူသည်။ ငါသည်ငါ့မျက်လုံးများ, ငါ့နှုတ်ခမ်းများနှင့်ဆံပင်၏အစွန်းအပေါ်ထားတော်မူ၏။ ဒီနေရာတွေမှာအစိုဓာတ်လိုအပ်တဲ့အခါ၊ စင်ကြယ်သောနှင့်ထိပ်တန်းထစ်ထုတ်ကုန်ဖန်တီးသောကြောင့် Keri ကျေးဇူးတင်ပါသည်
- တာရာ K
© 2021 MEMemp. Shopify ရဲ့၀န်ဆောင်မှု